Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny fizahan-tany Grika dia mizotra mankany amin'ny fanarenana tanteraka tamin'ny taona 2022
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Gresy • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny Minisitry ny Fizahantany Grika, izay minisitry ny Fahasalamana teo aloha tany Gresy nandritra ny areti-mifindra, Atoa Vasilis Kikilias, dia nandray ireo solontena tany amin'ny World Travel Market tany Londres tamin'ny alatsinainy 1 Novambra ary nanoritsoritra ny fomba nahatonga ny politikan'ny valan'aretina nanohana ny tombotsoan'ny firenena tamin'ny taona 2021 ary ny fomba manantena ny firenena ny fizahan-tany, izay manome 25% amin'ny toekareny, dia hiverina tanteraka amin'ny taona 2022.
tamin'ny 2021 dia niova ho +65% raha oharina tamin'ny taona 2019.
Ny fanarenana tanteraka ny fizahantany andrasana amin'ny 2022.
Ny fanitarana ny vanim-potoanan'ny fizahantany dia mandroso ary hanampy amin'ny fanarenana.
Nosoritan'Andriamatoa Kikilias ihany koa ny fanoloran-tenany amin'ny fomba fizahan-tany maharitra ary nanome antsipiriany momba ny fandrosoana tsara vitan'ny firenena tamin'ny fanitarana ny vanim-potoana.
Namoritra ny paikadiny mandritra ny 10 taona ihany koa i Gresy (Fandaharana stratejika nasionaly ho an'ny fampandrosoana ny fizahantany 2030), izay natomboka tao anatin'ny vanim-potoana sarotra indrindra, amin'ny resaka fanamby sy fifaninanana. Ny hevi-dehibe dia ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny vokatra, ny fidirana sy ny fifandraisana, ny fotodrafitrasa maitso/fampandrosoana maharitra ny fizahan-tany, ny fitantanana traikefa, ny fanabeazana sy ny fanofanana momba ny fizahantany, ny fomba fiasan'ny governemanta manontolo, ny rafitra mifehy sy ny fitantanana ny krizy.
Fitomboana taorian'ny areti-mifindra
Ny tanjon'i Gresy ho an'ny fizahan-tany amin'ny taona 2021 dia ny hahatratra 50% amin'ny tarehimarika 2019. Nahatratra 65% io tanjona io ary nihoatra ny XNUMX%, noho ny fampisehoana fakan-tahaka tamin’ity fararano ity.
Hoy Andriamatoa Kikilias: "Ny sehatry ny fizahan-tany grika dia naneho faharetana miavaka."
Nambaran’ny minisitra ihany koa fa “ny tarehimarika dia mampiseho fa avo roa heny ny vola azo amin’ny dia isan-taona. Ny tondro kalitao rehetra toy ny fandaniana amin'ny salan'isa sy ny faharetan'ny fijanonana dia nihatsara ihany koa. ”
“A feno fanarenana ny fizahantany grika andrasana amin'ny 2022 (raha mbola tsy misy variana vaovao mivoatra). Tsy mifototra amin'ny fieritreretana fatratra izany fa amin'ny angon-drakitra sarotra azonay momba ny isan'ny sidina vaovao zotra vaovao sy ny fahalianana naseho ho an'i Gresy avy amin'ny indostria.
“Ny fifohazana ny fizahantany dia hanohana ny fanarenana ara-toekarena ankapobeny. Na dia tamin'ity taona ity aza, ny tombantombanay voalohany momba ny fitomboana 3.6% dia novana ho 5.9% noho ny fahombiazan'ny sehatry ny fizahantany.
Manana tetibola 320 tapitrisa euros ho an'ny fampandrosoana ny fizahan-tany, fotodrafitrasa, fanavaozana ary fanatsarana ny fanabeazana ara-pizahantany sy ny digitalization ny Drafi-pirenena momba ny fanarenana sy ny faharesen-dahatra any Gresy.
Ny fizahan-tany dia manodidina ny 25% amin'ny Toekarena Grika. Misy fampiasam-bola lehibe eo amin'ny fantsona na ho an'ny fivoarana vaovao na ny fanavaozana ny taloha.
Ny fifandanjana amin'ny dia
Nanomboka tamin'ny Janoary-Aogositra 2021: Ambim-bava 5.971 miliara euros (Janoary-Aogositra 2020: Ambim-bava 2.185 miliara euros)
Janoary-Aogositra 2021: 6.582 miliara euros (Janoary-Aogositra 2020: 2.793 miliara euros, fitomboana 135.7%)
Fifamoivoizana fitsangatsanganana miditra
Aogositra 2021: Nitombo 125.5%. Janoary-Aogositra 2021: Nitombo 79.2%
Receipts / Firenena
Mponina any amin'ny firenena EU-27: 4.465 miliara euros, fitomboana 146.2%
Mponina any amin'ny firenena tsy EU-27: € 1.971 miliara, fitomboana 102.0%
Alemaina: 1.264 miliara euros, fitomboana 114.7%
Frantsa: 731 tapitrisa euros, fitomboana 207.7%
Royaume-Uni: EUR 787 tapitrisa, fitomboana 75.2%
Etazonia: 340 tapitrisa euros, fitomboana 371.5%
Rosia: 58 tapitrisa euros, fitomboana 414.1%
Nanohy ny teniny ny Minisitra hoe: “Tsy isalasalana fa ny areti-mifindra dia misy fiantraikany amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana ara-toekarena any amin'ny firenena rehetra. Ho an'i Gresy izay voakasika mafy amin'ny fidiram-bolan'ny fizahantany satria 1 amin'ny 4 euros dia tonga mivantana na ankolaka avy amin'ny sehatry ny fizahantany. Fanamby lalina ny fiatrehana ny olana momba ny fiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahoakantsika sy ny mpitsidika ary ny fiezahana hitazona ny toekarena misokatra. Amin'io lafiny io, ny lahatsoratro teo aloha tamin'ny naha minisitry ny Fahasalamana ahy nandritra ny roa taona farany dia niteraka fifamatorana tsy nisy toa azy teo amin'ny Fizahantany sy ny minisiteran'ny Fahasalamana.
"Ny hetsika nataon'ny praiminisitra Kyriakos Mitsotakis dia namorona endrika mahazatra amin'ny fanekena ny olona voan'ny vaksiny avy amin'ny firenena EU ary namela azy ireo handeha, ary koa ny fampiharana ireo protocoles henjana manerana ny sehatry ny fandraisana vahiny izay nanangana fahatokisana tsy manam-paharoa ho an'i Gresy ary nanampy tamin'ny faharetan'ny sehatry ny fizahantany.
"Nisy fiaraha-miasa akaiky kokoa amin'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny daholobe, izay niafara tamin'ny fanokafana malefaka ny indostrian'ny fitsangatsanganana grika, miaraka amin'ny fiarovana, ny matihanina ary ny protocole henjana izay nampiharina tamin'ny fomba fakan-tahaka. Ity fiaraha-miasa ity dia nisy fiantraikany tsara teo amin'ny fitovian'ny marika any Gresy.
“Ny angon-drakitra vonjimaika rehetra dia mampiseho fa nihoatra ny vinavinay tany am-boalohany izahay. Taorian'ny fisalasalana nanomboka tamin'ny volana Mey Jona ka hatramin'izao tamin'ny Oktobra ary tamin'ny faritra sasany tamin'ny Novambra dia mampiseho fa nahavita nahatratra ny tanjona tany am-boalohany 50% tamin'ny 2019 isika. Ankoatr'izay, ny angon-drakitra dia mampiseho fironana tsara amin'ny tarehimarika kalitao ihany koa. Ohatra iray dia mety ho ny salan'isa fandaniana isaky ny fitsangatsanganana izay niakatra teo amin'ny 700€ manomboka amin'ny (2020: €583, 2019: €535) ary koa ny halavan'ny fijanonana.
“Satria nanambara mialoha ny fomba hanokafana ny fizahan-tany iraisam-pirenena i Gresy, dia nomena fahatokisana hanao drafitra ny mpandraharaha, ny mpanjifa ary ny zotram-piaramanidina.
Hoy Andriamatoa Kikilias: “Ny fanitarana ny vanim-potoana dia tanjona mbola eo am-pamaranana. Nasehon'ity fararano ity fa any amin'ny toerana maro 'fahavaratra' dia afaka mandray vahiny hatramin'ny Novambra isika ary miomana handray vahiny indray manomboka amin'ny tapaky ny volana martsa. Gresy koa dia manana toerana isan-taona ao anatin'izany ny tanàna toa an'i Atena sy Thessaloniki izay afaka manintona ny mpitsidika rehetra.
"Ny drafitry ny hetsika ho an'ny 2022 dia ahitana ny famolavolana paikady ho an'ny tsena lavitra sy ny endrika fizahan-tany manokana, mametraka an'i Gresy ho toerana hitsidihana mandritra ny taona. Ny tanjona stratejika lehibe amin'ny Drafitra ara-barotra stratejika 2021 an'ny fizahan-tany grika dia ny famerenana ny indostrian'ny fizahan-tany any Gresy amin'ny fijerena ny toe-javatra ankehitriny, ny fironana nasionaly sy manerantany. Ny olona rehetra mandray anjara amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia, ho anay, singa tena ilaina; izany no antony hiezahantsika hanamafisana ny ezaka rehetra, amin'ny alàlan'ny Fikambanana Nasionalin'ny Fizahantany Grika, miaraka amin'ny fiaraha-miasa tsara lasibatra, fiaraha-miasa amin'ny dokam-barotra ary hetsika fampiroboroboana.
Kendrena ho modely amin'ny fizahan-tany maharitra i Gresy
Hoy Andriamatoa Kikilias: “Tianay ny hahatonga an'i Gresy ho modely amin'ny fizahan-tany maharitra. Gresy dia efa nanao sonia ny hetsika toy ny Mediteraneana: ranomasina modely amin'ny 2030 izay mikendry ny hiaro ny zavamananaina sy hampihena ny fanjonoana sy ny fandotoana ary koa ny fanaovana ireo nosy tsy misy karbônina sy plastika. Tamin'ny fihaonambe COP26 momba ny fiovan'ny toetr'andro tany Glasgow, ny Praiminisitra Grika dia nanolotra valim-pikarohana savaranonando momba ny fomba ahafahan'i Gresy manova ny roa amin'ireo fananany matanjaka indrindra – Santorini sy Mykonos – ho lasa toerana tsy misy plastika ary ho lasa Modely ho an'ny Filaminana amin'ny alalan'ny fomba fiasa manontolo. Mandritra izany fotoana izany, misy ny drafitra ho an'ny nosy Chalki amin'ny alàlan'ny angovo azo havaozina ihany.
Fampandrosoana maitso sy manga
Hoy Andriamatoa Kikilias: “Tianay ny hampahafantatra amin'ireo ho tonga mpitsidika any amin'ny faritra maro eto amin'ny firenena izay tsy dia fantatra loatra hatramin'izao fa toerana tsara indrindra hahatsapana ny fandraisana vahiny tena izy eto amin'ny firenentsika. Anisan’izany ny nosy lavitra sy ny faritra be tendrombohitra amin’ny tanibe.”
Ny ministeran'ny fizahantany dia mikendry ny hanohana ny fizahantany grika amin'ny andry roa, dia ny fampandrosoana maitso sy manga.
Ny Fampandrosoana Maitso dia afaka manafaingana ny fampandrosoana maharitra sy mahatafiditra ny sehatry ny fizahan-tany, amin'ny alalan'ny famolavolana tolo-kevitra ambony kokoa any amin'ny faritra tsy dia mandroso loatra ny indostrian'ny fizahan-tany, manentana ny fampiasam-bola ary manatsara ny fomba fijerin'ny asa any amin'ireo faritra izay nahitana ny voka-dratsin'ny valan'aretina.
Ny Blue Development dia mikendry ny hanatsara ny fidirana amin'ireo tora-pasika amoron-dranomasina sy ny seranan-tsambo mba hanatsarana bebe kokoa ny kalitaon'ny fizahantany an-dranomasina nasionaly.